ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒူးရင်းမလိုင်နဲ့ ဒူးရင်းဘူဖေးရတဲ့ဆိုင်လေး Wake n' Bake
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒူးရင်းမလိုင်နဲ့ ဒူးရင်းဘူဖေးရတဲ့ဆိုင်လေး Wake n’ Bake
24 May 2018 . 4:33 PM
ဒီလိုဒူးရင်းသီး လှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ ရာသီများရောက်ရင် ကိုယ်တို့ ဗမာတွေ အားရပါးရ တောင့်တကြတာ ဒူးရင်းသီးရယ် သူနဲ့လုပ်တဲ့ မုန့်မျိုးစုံပဲမလား။
ဒီိအချိန်တော့ ဒူးရင်းပဲ ဓါတ်တွေ့နေလို့ လတ်တလော ဒူးရင်းသီးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဒူးရင်း ကိတ်၊ ဒူးရင်း Sandwich ၊ ဒူးရင်း pillow ၊ ဒူးရင်းဖျော်ရည် အပြင် ခုနောက်ဆုံး ဒူးရင်းမလိုင်ပါ စုံပလုံစိနေအောင်ရတဲ့ လတ်တလောနာမည်ကြီး ဒူးရင်းဆိုင်လေးဆီ အခရာက ချီတက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဆိုင်လေးက လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ “Wake n’ Bake ” တဲ့။ ဒူးရင်းမုန့်တွေအကောင်းဆုံးစားလို့ရမယ့် ဆိုင်လေးပေါ့။ လူတိုင်းမသိသေးတာက သူ့ဆီမှာ ခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ဒူးရင်းမလိုင်နဲ့ ဒူးရင်း Elixir ဘူဖေး အဝစားအကြောင်းပါ။ စိတ်ဝင်စားသွားပြီမလား?
ဆိုင်လေးထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ဒူးရင်းခြင်းကြီးတွေဆိုတာ ၄,၅ ခြင်းပုံနေရော။ ဒူးရင်းနံ့လေးတွေလည်း သင်းလို့။ ပြီးတော့ မှန်ပုံးလေးတွေနဲ့ ကိတ်တွေ၊ မုန့်တွေ နဲ့ တခြားစားသောက်စရာလေးတွေရောင်းတယ်။ ဆိုင်လေးက ၂ ထပ်ရှိတယ်။ အပေါ်ထပ်လေးတွေ ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။
ကိုယ်ကတော့ ဒူးရင်းပဲ စိတ်ဝင်စားလို့ ဒူးရင်းမုန့်တွေရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာတဖြည်းဖြည်းပါသွားတာဆိုတာ။ ရွေးရခက်နေရင်းနဲ့ပဲ ဘာကြည့်ကြည့် ဒူးရင်းဖတ်တွေချည်းမြင်ရတဲ့ ဒူးရင်း Sandwich ရယ်၊ သူ့ဆိုင်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒူးရင်း ခေါင်းအုန်း ခေါ်တဲ့ မုန့်လေးရယ်၊ နာမည်ကြီး နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ ဒူးရင်းမလိုင်ရယ် မှာစားခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးစားစေချင်တာက “Wake n Bake” ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ နာမည်ကြီး ဒူးရင်းမလိုင်ပါ။ တစ်ပွဲလုံး မလိုင်အနှစ်အဖတ်တွေ ပြည့်နေတာကတပိုင်း၊ ကျန်တခြမ်းမှာက ဒူးရင်းအနှစ်အလွှာလိုက်ကြီးက အပြည့်၊ နွားနို့ရည်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ဆိုတော့ ကောင်းချက်က လျှာပါလည်တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဒူးရင်းမလိုင်ပါပဲ။ သူ့ဟာက အချိုထက်အဆိမ့်ဘက်သွားလို့ တခြားချိုအီတဲ့ဟာတွေမစားခင် ဒူးရင်းမလိုင်အရင်စားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ၃၅၀၀ ကတော့ တန်ချက်ပါပဲ။
ဒုတိယ အကြိုက်ဆုံးက ရိုးရာမပျက်ကောင်းနေဆဲ ဒူးရင်း Elixir ခေါ် Pillow လေးတွေပါ။ Whipping Cream အကောင်းစားသုံးထားတယ်။ ဒူးရင်းဖတ်အကိတ်ကြီးတွေအပြည့်ပါတယ်။ အပြင်ခွံသားလေးဆိမ့်တယ်။ ပြီးတော့ ခပ်ကြီးကြီး ၂ခုလုံးမှ ၂၈၀၀ တဲ့။ ၂၀၀၀ တန်လည်းရှိတယ်။ ရောက်ရင်မဖြစ်မနေစားခဲ့ရမယ့်မုန့်ပါ။
နောက်ဆုံးစားခဲ့တာတော့ Durian Sandwich ပါ။ ဒူးရင်းသီး အနှစ်တွေအပြည့်ကို Sandwich ပေါင်မုန့်သားထဲ ညှပ်ထည့်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ ဒူးရင်းနဲ့ ပေါင်မုန့်အရသာချည်း သီးသန့်ပါ။ ဒူးရင်းအရသာ ချိုအီနေတာ ခံစားရမှာပါ။ ၃၀၀၀ ပါတဲ့။
သတင်းကောင်းတစ်ခုက အပတ်စဉ် ဒူးရင်းရာသီမကုန်မချင်း ကြာသပတေးနဲ့ သောကြာနေ့ ညတိုင်း ည ၇ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိ ဒူးရင်း Elixir Buffet ရှိတယ်တဲ့။ ည ၇ နာရီကနေ ၁၀ နာရီထိ ဒူးရင်း Elixir မုန့်လေးတွေ ကြိုက်သလောက်အဝစားမှ ၈၈၀၀ ကျပ်နဲ့ အချိန်လည်း မကန့်သတ်ထားတော့ ပျော်စရာကြီးပါပဲ။ ဆေးသာဆောင်ထားပေတော့ပဲ။
“Wake n Bake” ကို တစ်ခုသဘောကျမိတာက ဒူးရင်းသီးတွေကို အလုံးကောင်း ချိုမွှေးနေတဲ့ အသီးတွေချည်း သေချာစေတနာနဲ့သုံးထားတာကိုပါပဲ။ စားရတာ တစ်ပွဲဆိုတစ်ပွဲ ကျေနပ်မှုအပြည့်ရစေမှာပါ။
လိပ်စာက အမှတ် ၉၄၁,A သစ္စာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်နားပါ။ အမှတ် ၉, E (၁) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ မရမ်းကုန်းမှာလည်း ရှိသေးတယ်တဲ့နော်။ ဒူးရင်းဘူဖေးကတော့ ညမှရတာနော်။ အရသာကောင်းလွန်းလို့ ဒူးရင်းချစ်သူတွေ မဖြစ်မနေပြေးစားရမယ့် ဆိုင်လေးပါလို့။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အကောငျးဆုံး ဒူးရငျးမလိုငျနဲ့ဒူးရငျးဘူဖေးရတဲ့ဆိုငျလေး Wake n’ Bake
ဒီလိုဒူးရငျးသီး လှိုငျလှိုငျပေါတဲ့ ရာသီမြားရောကျရငျ ကိုယျတို့ ဗမာတှေ အားရပါးရ တောငျ့တကွတာ ဒူးရငျးသီးရယျ သူနဲ့လုပျတဲ့ မုနျ့မြိုးစုံပဲမလား။
ဒီအခြိနျတော့ ဒူးရငျးပဲ ဓါတျတှနေ့လေို့ လတျတလော ဒူးရငျးသီးနဲ့ပတျသကျရငျ ဒူးရငျး ကိတျ၊ ဒူးရငျး Sandwich ၊ ဒူးရငျး pillow ၊ ဒူးရငျးဖြျောရညျ အပွငျ ခုနောကျဆုံး ဒူးရငျးမလိုငျပါ စုံပလုံစိနအေောငျရတဲ့ လတျတလောနာမညျကွီး ဒူးရငျးဆိုငျလေးဆီ အခရာက ခြီတကျခဲ့ပါတော့တယျ။
ဆိုငျလေးက လူတိုငျးသိပွီးသားပါ။ “Wake n’ Bake ” တဲ့။ ဒူးရငျးမုနျ့တှအေကောငျးဆုံးစားလို့ရမယျ့ ဆိုငျလေးပေါ့။ လူတိုငျးမသိသေးတာက သူ့ဆီမှာ ခုနောကျဆုံးထှကျတဲ့ ဒူးရငျးမလိုငျနဲ့ ဒူးရငျး Elixir ဘူဖေး အဝစားအကွောငျးပါ။ စိတျဝငျစားသှားပွီမလား?
ဆိုငျလေးထဲကို ဝငျလိုကျတာနဲ့ ဒူးရငျးခွငျးကွီးတှဆေိုတာ ၄,၅ ခွငျးပုံနရေော။ ဒူးရငျးနံ့လေးတှလေညျး သငျးလို့။ ပွီးတော့ မှနျပုံးလေးတှနေဲ့ ကိတျတှေ၊ မုနျ့တှေ နဲ့ တခွားစားသောကျစရာလေးတှရေောငျးတယျ။ ဆိုငျလေးက ၂ ထပျရှိတယျ။ အပျေါထပျလေးတှေ ထိုငျလို့ကောငျးတယျ။
ကိုယျကတော့ ဒူးရငျးပဲ စိတျဝငျစားလို့ ဒူးရငျးမုနျ့တှရေဲ့ ချေါဆောငျရာတဖွညျးဖွညျးပါသှားတာဆိုတာ။ ရှေးရခကျနရေငျးနဲ့ပဲ ဘာကွညျ့ကွညျ့ ဒူးရငျးဖတျတှခေညျြးမွငျရတဲ့ ဒူးရငျး Sandwich ရယျ၊ သူ့ဆိုငျရဲ့ အကောငျးဆုံး ဒူးရငျး ခေါငျးအုနျး ချေါတဲ့ မုနျ့လေးရယျ၊ နာမညျကွီး နောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ ဒူးရငျးမလိုငျရယျ မှာစားခဲ့တယျ။
ပထမဆုံးစားစခေငျြတာက “Wake n Bake” ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျတဲ့ နာမညျကွီး ဒူးရငျးမလိုငျပါ။ တဈပှဲလုံး မလိုငျအနှဈအဖတျတှေ ပွညျ့နတောကတပိုငျး၊ ကနျြတခွမျးမှာက ဒူးရငျးအနှဈအလှာလိုကျကွီးက အပွညျ့၊ နှားနို့ရညျဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ဆိုတော့ ကောငျးခကျြက လြှာပါလညျတယျ။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အကောငျးဆုံးဒူးရငျးမလိုငျပါပဲ။ သူ့ဟာက အခြိုထကျအဆိမျ့ဘကျသှားလို့ တခွားခြိုအီတဲ့ဟာတှမေစားခငျ ဒူးရငျးမလိုငျအရငျစားမှ အဆငျပွမှောပါ။ ၃၅၀၀ ကတော့ တနျခကျြပါပဲ။
ဒုတိယ အကွိုကျဆုံးက ရိုးရာမပကျြကောငျးနဆေဲ ဒူးရငျး Elixir ချေါ Pillow လေးတှပေါ။ Whipping Cream အကောငျးစားသုံးထားတယျ။ ဒူးရငျးဖတျအကိတျကွီးတှအေပွညျ့ပါတယျ။ အပွငျခှံသားလေးဆိမျ့တယျ။ ပွီးတော့ ခပျကွီးကွီး ၂ခုလုံးမှ ၂၈၀၀ တဲ့။ ၂၀၀၀ တနျလညျးရှိတယျ။ ရောကျရငျမဖွဈမနစေားခဲ့ရမယျ့မုနျ့ပါ။
နောကျဆုံးစားခဲ့တာတော့ Durian Sandwich ပါ။ ဒူးရငျးသီး အနှဈတှအေပွညျ့ကို Sandwich ပေါငျမုနျ့သားထဲ ညှပျထညျ့ထားတာပါ။ ဒါကတော့ ဒူးရငျးနဲ့ ပေါငျမုနျ့အရသာခညျြး သီးသနျ့ပါ။ ဒူးရငျးအရသာ ခြိုအီနတော ခံစားရမှာပါ။ ၃၀၀၀ ပါတဲ့။
သတငျးကောငျးတဈခုက အပတျစဉျ ဒူးရငျးရာသီမကုနျမခငျြး ကွာသပတေးနဲ့ သောကွာနေ့ ညတိုငျး ည ၇ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိ ဒူးရငျး Elixir Buffet ရှိတယျတဲ့။ ည ၇ နာရီကနေ ၁၀ နာရီထိ ဒူးရငျး Elixir မုနျ့လေးတှေ ကွိုကျသလောကျအဝစားမှ ၈၈၀၀ ကပျြနဲ့ အခြိနျလညျး မကနျ့သတျထားတော့ ပြျောစရာကွီးပါပဲ။ ဆေးသာဆောငျထားပတေော့ပဲ။
“Wake n Bake” ကို တဈခုသဘောကမြိတာက ဒူးရငျးသီးတှကေို အလုံးကောငျး ခြိုမှေးနတေဲ့ အသီးတှခေညျြး သခြောစတေနာနဲ့သုံးထားတာကိုပါပဲ။ စားရတာ တဈပှဲဆိုတဈပှဲ ကနြေပျမှုအပွညျ့ရစမှောပါ။
လိပျစာက အမှတျ ၉၄၁,A သစ်စာလမျး၊ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ ဘုရားလမျးမှတျတိုငျနားပါ။ အမှတျ ၉, E (၁) ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျး၊ နဝရတျလမျးသှယျ၊ မရမျးကုနျးမှာလညျး ရှိသေးတယျတဲ့နျော။ ဒူးရငျးဘူဖေးကတော့ ညမှရတာနျော။ အရသာကောငျးလှနျးလို့ ဒူးရငျးခဈြသူတှေ မဖွဈမနပွေေးစားရမယျ့ ဆိုငျလေးပါလို့။